Dimbin'ny Nofy : pôetan'ny fifohazana
20 ôktôbra 2019
Tovovavy tanora, pôetan'ny Havatsa-Upem indray no vahinintsika anio, fantatra amin'ny solon'anarana hoe Dimbin'ny Nofy. Heriarilala Andriamamonjy no mandray azy ato amin'ny tranonkala ny Pôetawebs.
Dimbin'ny Nofy, faly miarahaba anao tonga soa ato amin'ny efitry ny tapatapakahitra.
Faly miarahaba, dia mankasitraka amin'ny fandraisana!
Mety ho misy amin'ny mpisera no mbola tsy mahafantatra anao. Azonao fintinina fohifohy ve hoe iza marina no vahinin'ny Pôetawebs?
Dimbin'ny Nofy no anarako amin'ny sehatry ny literatiora izay tsy misy ifandraisany amin'ny anarana napetak'ireo ray sy reniko "Rahezarisoa Sannie". Tao Ankisabe distrikan'ny Soavinandriana, faritra Itasy no nahalatsahan'ny tavoniko ary valovotaka ao Tamponala aho. Manoratra satria teren'ny eritreritra tsy mandry ka efa eo andalam-pamoahana izany ho boky indrindra.
Mba zarao aminay ary ny antony nisafidiananao ny solon'anarana hoe Dimbin'ny Nofy.
Dimbin'ny Nofy satria fifohazana no ao ambadik'izay, aorian'ny nofy ny "tena izy", nofy moa azo adika ho eritreritra, ny dimby entina hilazana fitohizana izany hoe : "fitohizan'eritrerit­ra", tsy mifarana fa mitohy hatrany.
Eny àry e, nifoha tao amin'izay nofy izay ianao ka nikarakara ary nahamasaka ho an'ny mpankafy literatiora, ambarao amin'ny mpitia pôezia ary izany nahandronao izany?
"FONGATRA" no lohatenin'ny boky, amboaran-tononkalo eo ho eo amin'ny 80 eo no mandrafitra azy. Mba hamongatra izay any am-pon'ny mpamaky ka hahatonga fahatongavan-tsaina sy fifohazana... Fifohazam-pitia, fifohazan-kery, fifohazan'ny lasa sy izay mety ho efa nolalovana... hahafahana manitsy ny hoavy... Fongatra satria misy ny "tsy azo fafana" amin'ny fiainana ary fongatra noho izy amboaram-betsovetso notehirizina sy nafenina kely tany ho any nandritra ny fotoana ela no naseho ho hitan'ny fiaraha-monina.
Rahoviana ary aiza no hivoaka amin'ny fomba ôfisialy ny Fongatra?
Amin'ny 24 oktobra ho avy izao no mivoaka ny boky, ho hitantsika ao amin'ny Tahala Rarihasina Analakely amin'ny 2 ora.
Amin'ny 24 oktobra hoy ianao ny "Fongatra", izany hoe ao anatin'ny herinandron'ny Havatsa tsara, azonao lazaina anay ve ny nahatonga anao hiditra ao anatin'io fikambanana io?
Havàtsa satria efa "nofinofy" fahazaza ilay izy, tsy nieritreritra ny hisafidy fikambanana hafa ankoatra azy aho... Izy no niriko ka nosafidiako ary izy no tiako.
Ao amin'izay fikambanana tianao sy nirinao izay, manana andraikitra manokana tanana ao ve ianao?
Dimbin’ny Ny Nofy
Tsia...mpikambana fotsiny aho!
Oviana àry no nanomboka nanoratra i Dimbin'ny Nofy? Efa nisy dingana vita teo amin'ny literatiora ve teo aloha sa ny Fongatra no voalohany?
Nanomboka nanoratra tamin'ny 2015 tany ho any, dingana vita : efa nanao hetsika ara-kolontsaina tao amin'ny CEMDLAC talohan'ny FONGATRA, niarahana tamin'ny poeta hafa...
Inona avy àry no mety hanamarika ny hetsika amin'io, inona avy no mety hitranga?
Antsa tononkalo no hatao ka somary hiainana kely ny tononkalo (arahina fihetsika), hisy hira handravaka ny hetsika. Ny ankoatra izay? Aleo any mahita azy.
Marina tokoa izany, aleo hilendalenda tsara ny mpankafy dia tamy avy eo maka tsirony. Misy namana hiara-kamelona ny tononkalo aminao ve?
Misy tokoa izay isaorako azy ireo eto sahady dia i Felamboahangy RV, i Gasy Masiaka ary i Andoniaina Cristelle.
Mahafinaritra izany fa hahita pôeta tanora efatra hamelona ny Fongatra. Mialoha ny hamaranantsika azy àry misy teny tianao hanampiana ve?
Ny tiako hambara dia hafatra kely ho an'ny Malagasy tsy ankanavaka : "ankamamio ny tenintsika fa isan'ny mampandroso sy mampatanjaka ny firenentsika izany; aoka tsy ho menatra fa sahy mijoro... sahy miresaka amin'ny teny malagasy."
Misaotra anao Dimbin'ny Nofy nitondra izay hafatra mafonja izay, fanentanana farany avy aminao àry momba ny Fongatra e!
Tongava maro fa haheno izay nofongariko ianareo, handre vetsovetso ela notehirizina ary samy hahazo ny anjarany... Tongava namana a!
Isaorana ianao Dimbin'ny Nofy nanaiky nivahiny teto aminay. Mahavità soa amin'ny "Fongatra", mitomboa talenta. Mandra-pitafa indray!
Misaotra indrindra anao nandray. Mankasitraka e!
Sary : Dimbin'ny Nofy